Jidka Easy inuu ka soo kabsado tirtiray Xogta laga Samsung Cell Phone
I9250 Root Galaxy Nexus
I9300 Root Galaxy S3
I9000 Root Galaxy S2
2. Ladnaansho Samsung
Samsung Xiriirada Recovery
Kabsado Messages ka Samsung Galaxy
Ka Galaxy qod6 soo kabsado Text
Ka Galaxy Core soo kabsado Photo
Ka Samsung Galaxy soo kabsado Video
Ka Samsung Galaxy / Fiiro soo kabsado SMS
Print Text ka Galaxy / Fiiro
Kabsado Memory Samsung Gudaha
Kabsado Messages Samsung
Kabsado Messages ka Broken Samsung
Samsung Recovery Password
Qof kastaa wuxuu si aad u nadiifiso ay telefoonka ugu yaraan hal mar lixda bilood ee. Images All aan loo baahnayn, videos, xiriirada, cinwaanada emailka, fariimaha qoraalka ah, songs u baahan yihiin in la tirtiro si loo meel u samaysaa kuwo cusub. Laakiin mararka qaarkood, daqiiqado ugu muhiimsan ee noloshaada oo ah qaab images ama videos kale oo ey la tirtiro xogta la rabin, oo ay tani tahay markii aad u baahan tahay in xal kaamil ah inuu kaa caawiyo inaad ka soo kabsado content tirtiray. Waxa jira dhowr hab oo loo sameyn in, laakiin marka hore, aynu eegno saddex ka mid ah sababaha ugu badan ee ka dambeeya khasaaraha ka mid ah macluumaadka ku telefoonada Samsung.
• barnaamijyadooda Clean-up Goof-up laga yaabaa
Waxaa jira dhowr barnaamijyadooda nadiif-up in ay bixiyaan si ay u nadiifiyaan files rabin iyo khasnado taleefanada aad. Codsiyada Kuwani waa ammaan ah, oo balaayiin dad ah ayaa eraygii u isticmaalaan si ay u sameeyaan qaar ka mid ah meel bannaan oo dheeraad ah oo ay telefoonka gacanta. Laakiin mararka qaarkood, Chine, kuwaas oo soo afjari-up laga yaabaa in la tirtiro files qaldan. Tani waxay u muuqan yaabaa in cajiib ah, laakiin xitaa xal anti-virus tirtirto laga yaabaa in sawiro aan ku kharribeen, videos, iyo faylasha kale.
• Xogta tirtiray halka wareejinta content ka PC
Qof walba si PC in-si ay u dar ama tirto faylasha isku xira isaga ama iyada phone smart. Mararka qaarkood, your computer tirtirto laga yaabaa in dhammaan xogta ku telefoonka iyo kaadhka xusuusta (SD) oo keliya, maxaa yeelay, aad ula kac ahayn taabtay "qaab".
Anti-virus rakibay aad kombuutarka sidoo kale kac tirtiri kartaa files aan musuqmaasuqa ka telefoonka ama PC kiniin ah marka aad ku soo lifaaq qalab aad si aad u computer la cable xogta kala iibsiga USB.
• Xogta si qalad ah la tirtiro ka phone
maxay noqon lahayd dareen-celin haddii aad caruur furmay aad Galaxy ee gallery, yeerto on "doortaan oo dhan" oo si fudud u tirtirtaa oo dhan sawiradaada? Tani hubaal aad cabsi-gelin doono, laakiin ma tihid kaligaa. Waxaa jira dhowr qof halkaas oo si qalad ah ay tirtirto photos, videos, iyo waraaqaha ka telefoonka, oo ay ogaadaan in ay muhiimadda ka dib.
Qeybta 1: Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka Samsung telefoonada gacanta
Mar kasta oo aad wax ka qalab Android aad tirtirto, file ka walaacsan ma aad isla markiiba la tirtiro. Waxaa weli in telefoonka, iyo in aan si fudud lagu bedelay xogta isla markiiba in aad ku dari dib marka la tirtiro file ka walaacsan. Si aad u riday erayada fudud, waxaad soo kaban karto xogta aad ka tir qalab Android ilaa aad ha ku darin wixii macluumaad kale ah ee qalabka.
Haddii aad xaqiiqsato in aad la tirtiro wax qalad ah, oo kulli wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa joojiso isticmaalka telefoonka, oo ay ku xidhmaan software in kaban karto macluumaadka.
Sidii hore loo soo xusay, waxaa jira dhowr Chine in ay qaban karaan shaqada. Laakiin, Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) dadkii badnaa dhinaca uga taagan. Software waa la jaan qaada qalabka ka badan 2000.
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Dr.Fone for Android
Ku rakib Wondershare Dr. Fone on your computer. Markaas, lagu xiro qalabka Android aad si aad PC isticmaalaya cable USB.
Ka dib markii isku xira qalab aad si aad PC, telefoonka ama kiniin PC waxaa laga yaabaa in aad tahay degdegga USB Debug. Raac habraaca iyo sidaas oo kale sameeyaan.
Tallaabada 2. Dooro file bartilmaameedka in iskaan
Ka dib markii debugging USB, Dr. Fone aqoonsan doonaa qalab aad. Haddaba mar labaad aad telefoon ama kiniin aad keento doonaa Superuser codsi oggolaansho in ay oggolaadaan in Dr. Fone in ay ku xidhmaan. Just guji "ogolow".
Ka dib markii in, Dr. Fone ku tusi doonaa shaashadda soo socda oo aad weydiisan kartaa in aad doorato nooca xogta ama faylasha in iskaan iyo soo kabsado. Haddii aad rabtid inuu ka soo kabsado photos, riix qaybta isku mid ah. On shaashadda soo socda, dooro ikhtiyaarka ah "tirtiray files".
Tallaabada 3. Ladnaansho content tirtiray taleefanada Samsung
Daqiiqado yar gudahood, software tusi doonaa oo dhan photos tirtiray. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa guji hoos photos in aad rabto in aad soo kabsado guji tab ka soo kabsado. Waxaad photos dib ay noqon doontaa meesha aad rabto in ay noqdaan, in aad telefoonka ee gallery!
Talooyin: Ma idiin tahay wakhti fiican oo lagu iibsado Samsung Galaxy qod6 Edge hadda?
Qod6 Edge ayaa soo bandhigay qalooca dual, design cusub oo geesi ku qasabtay eedeymahaas Samsung oo dhan in ay ku heshiiyaan in qod6 Edge ayaa ka xiiseeyo, maskaxda, oo quruxduna inay qaataan iPhone iyo qalabka kale ee Android.
Design waa mid u gaar ah in user ku faraxsan yahay halka u haysta in isaga / iyada gacanta. Qod6 Edge yahay horyalka Talyaaniga oo caato ah, waa baabi'i doontaa in aad jeebka, dhexeeya walax kale, iyo at-oo dhan ma waxaad ka heli doontaa in dareen jeebka weyn.
Waxaad ka dhex 128 GB iyo 64 GB kala duwanaansho, labada orod ee 64-yara core processor octa dooran kartaa, oo aad leedahay RAM 3GB. Its bandhigay 5.1-inji ah waa wanaag ku filan inay si raaxo leh Daawo bandhigyada aad ugu jeceshahay on YouTube. Tan ugu muhiimsan, sida ay u eegista user hore, mar eedeeyay, qalabka shaqayn karo, waayo, mid maalin-kasta oo isticmaalka culus.
Waxaa jira dhinacyo wax yar uun xun ee qod6 Edge. Qalabka ma bixiyaan bateriga feature kaydinta iyo swappable fideysa ayaa sida caadiga ah qod6. Shidma faraha u muuqataa in ay niyad jab kale.
Guud ahaan, haddii aad raadinayso ee dukaamada ugu wanaagsan ee Android, taas oo caddaynaysa in ay waqti ku haboon in ay u baddashaan SE6 Edge. Waxa uu helay oo dhan rasaas ah in Samsung siin karaan.
Haddii aad doonayso inaad tagto phone heshiis, waa in aad ogolaataa in aad bixiso ilaa $ 100 in ka badan wixii aad bixisay qod6. Haddii aad doonayso inaad tagto telefoonka aan heshiis, waa in aad ogolaataa in aad bixiso inta u dhaxaysa $ 100 iyo $ 130 in ka badan wixii aad bixisay qod6.
Wondershare Dr.Fone for Android - hab fudud inuu ka soo kabsado aad u Khasaaray Android Data
Taageerayaan 6000+ qalabka Android ay ka mid yihiin Samsung, HTC, Google, LG, iwm
Available inuu ka soo kabsado tirtiray xiriirada, fariimaha, sawiro, video, wac taariikhda, waraaqaha, iwm .
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo eegista soo kabsadaan wixii aad rabto in aad ka natiijada scan qalabka Android aad.
Labada xidid iyo unrooted qalabka Android waxaa taageera.
Kabsado fariimaha qoraalka ka Android
Kabsado Photos ka Android Devices
Kabsado Xiriirada ka Android Devices
Kabsado Messages WhatsApp
Kabsado Videos ka Android Devices
Android ka soo kabsado Call Log
Articles badan oo ku saabsan Transfer Android
Data ka dhaqaaq Android inay Android
Bedelka Nokia Xiriirada in Samsung Galaxy S3 / S4 / S5 / qod6 // Fiiro 4
Apps ka Android Bedelka
> Resource > Samsung > Waa kuwee waa habka ugu wanaagsan ee ay u soo kabtaan content tirtiray taleefanada Samsung?